Iindaba - Ngaba i-tableware ye-china tableware ilula kakhulu ukuyibamba?
Ngaba i-bone china tableware ilula kakhulu ukuyibamba?
I-Bhritane yasungula i-bone china tableware kangangeenkulungwane ezisibhozo. Emva kophuculo lwehlabathi, ibe yenye yeentlobo ze-porcelain ezizezona zibalaseleyo emhlabeni. I-Bone china tableware ngokungathandabuzekiyo ilunge kakhulu ukuhombisa itafile yomtshato, kuba amathambo alukhuni kwaye agudile, ahambelana nomtshato ococekileyo, othembekileyo nothando. Kuba ngaphezulu kwesinye kwisithathu sothuthu lwezityalo ezitya utyani ezidityanisiweyo zongezwa eludongweni, ithambo le China labizwa ngegama lalo lukhethekileyo lomboniso wobulukhuni kunye ne-porcelain eguqukayo. Ngenkqubo yokudubula eyahlukileyo, ukungcola okungaphezulu kudongwe kuyasuswa, kukhokelela kwithambo elimhlophe le-china, elithambileyo, elikhanyayo, elikhanyayo, elingenazimpazamo, kwaye elibhityileyo kune-porcelain, kwimbonakalo ekhethekileyo ecocekileyo
ingqiqo. Ukongeza, amathambo nawo anzima kakhulu. Kumachaphaza amane eetheyina zee-Rolls-Royce, ezi zine zekristale zixhasa ubunzima iRV enokuthi ibaleke!
I-china emhlophe ethambileyo emhlophe ithambo ihlala isetyenziswa kwitheyibhile yomtshato waseNtshona. Luhlobo lwendalo olwahlukileyo lwethambo lendalo, kunye nentyatyambo entle kunye nepeyinti yeentaka ezipeyintiweyo okanye ubume begophe elikhethekileyo, ihlala itafile entle kakhulu. Nje ukuba i-bone yetheyibhile yetafile kunye nemibala ekhanyayo okanye iitafile zentyatyambo ecacileyo, ukukhanya okukhanyayo kunye nokuthandana kweentyatyambo zetafile kufakwe umkhondo, zivela etafileni njengeethoni ezikhanyayo, imigca entle kunye nencasa emnandi. Olu luhlobo lokungakhathali kwaye luhle, luxabisekileyo, njengomtshato wesiNtu ngokwawo, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, lufuna ulawulo olululo kunye nokuchuma.
Ubume bethambo le-china liphezulu. Xa kuthelekiswa ne-porcelain yesiqhelo yesiqhelo, i-china yethambo inokuhambisa okuhle kokukhanya, kwaye inokubonisa ubuhle, ukuqaqamba nokucoceka okufana nejeyidi. Ukongeza, i-china bone ineempawu zeplastikhi ephezulu, inokwenza umbala we-glaze ugude, upeyintwe ngombala, kwaye unzima kwaye uzinzile. Izinto eziphambili: iseti yethambo i-china tableware, ithambo china mugs; ilungele isihlwele: iseti yetafile ye-china itafile yeyona ilungele ukuhlangana kwakhona kosapho kunye nabahlobo, lonke usapho lunesiselo, kwaye inokusetyenziswa njengezipho kumtshato kunye nokufudumeza indlu kwezihlobo nabahlobo; Ixabiso lentengiso: iseti yethambo i-tableware yi-High-end tableware ngokubanzi inexabiso eliphezulu.
Itheyibhile eneepateni zesinyithi, ezinje ngegolide, ukujikeleza kwesilivere, njl., Ayinakufakwa kwimayikroweyidi; ayinamsebenzi kwi-steamer.